IiEmojis ze-WhatsApp kunye ne-Emoticons ezinentsingiselo- EmojisWiki.com
Umsebenzi kunye neMidlalo
Ukuhamba kunye neeNdawo
IiEmojis ze-WhatsApp kunye ne-Emoticons ezinentsingiselo
Ii-Emoticons zadalwa ngonyaka ka-1990 kwaye yayilinyathelo elikhulu ekutshintsheni indlela abantu abanxibelelana ngayo besebenzisa imidiya yedijithali. Ukususela kwimvelaphi yabo baye banceda ukunika intsingiselo engcono kwiingcamango kwaye bavumele ukuba uveze iimvakalelo zakho okanye iimvakalelo ngendlela ebanzi.
¿Ubusazi ukuba ungafumana amakhulu e-emojis kwikhibhodi yakho yedijithali?? Ezi ngokwemvelo zithatha indawo yemiqondiso ekudala isetyenziselwa ukumela amabinzana athile afana noncumo, iintliziyo, okanye insini enkulu. Obu bubuso obuncinci obunembonakalo engapheliyo.
Ngenxa yoku kungasentla, kweli nqaku sichaza uluhlu lwee-emoticon ezinentsingiselo yazo, uya kuyazi ukuba yintoni i-emojis, isetyenziselwa ntoni, zezona zidumileyo nangaphezulu.
Uluhlu lwee-emojis kunye neemvakalelo ezinentsingiselo ngokweendidi ze-WhatsApp kunye ne-Facebook
Ukutya kwe-WhatsApp kunye nokuSela i-Emojis kunye ne-Emoticons ezinentsingiselo
Ii-Emojis kunye nee-Emoticons ze-WhatsApp iiMpawu ezinentsingiselo
WhatsApp Animal Emojis kunye Emoticons ezinentsingiselo
Umsebenzi we-WhatsApp kunye nee-Emojis zeMidlalo kunye ne-Emoticons ezinentsingiselo
Ii-Emojis kunye ne-Emoticons ze-WhatsApp Izinto ezinentsingiselo
Uhambo lwe-WhatsApp kunye neNdawo ye-Emojis kunye ne-Emoticons enentsingiselo
Ii-Emojis zabantu be-WhatsApp kunye ne-Emoticons ezinentsingiselo
Yintoni i-emoticons okanye i-emojis?
Ii-emoticons zihambelana nabalinganiswa abasetyenziswe kumazwe okanye kwimiyalezo ye-elektroniki kunye namaqonga e-intanethi afana ne-Instagram, i-WhatsApp okanye i-Facebook emele iimvakalelo zomntu, iminqweno, iingcamango okanye iimvakalelo ngendlela ebonakalayo eyahlukileyo.
Njengoko sibonisile ekuqaleni imvelaphi yayo yiJapan kwaye igama layo libhalwe njenge 絵⽂字 elenziwe ngonobumba "e" kunye negama elithi "moji". Ezi ziye zaduma kangangokuba kwanamaziko emfundo ephakamileyo azithathele ingqalelo ngokukhetha ezinye njengazo igama lonyaka e 2015.
Ukudalwa kwezi zibonakaliso ezibonakalayo kubangelwa ikakhulu kwiShigetaka Kurita. Ndiyabulela kule nto, abasebenzisi bexesha bamele iimeko ezipheleleyo bezisebenzisa kwiimpawu ze-160 ezivunyelwe yimiyalezo.
Ekuqaleni i-emoji ilinganiselwe kwimilinganiselo ye-12 x 12 iiphikseli ikakhulu ngenxa yothintelo lobuchwephesha bomzobo bexesha. Ekubeni ezi mboniso ezibonakalayo zazingekho phantsi kwelungelo lokushicilela, abathengisi abaninzi baseJapan bathatha ithuba lokuzenzela imifanekiso yabo.
Ndiyabulela apha ngasentla, namhlanje ezi mpawu zisetyenziswa rhoqo kwaye ziluncedo kakhulu xa ubhala nawuphi na umyalezo.
Zisetyenziselwa ntoni kuWhatsApp nakuFacebook?
Ii-Emojis bezisetyenziswa ekuqaleni kwimiyalezo ebhaliweyo ukubonisa umzobo iimvakalelo ezithile. Nangona kunjalo, ngeenguqu zanamhlanje zetekhnoloji, ziquka iikhonsepthi ezivela kwizihloko ezahlukeneyo ukuba ubonise iimeko ezahlukeneyo zobomi ngeyona ndlela ingcono.
Kwiindawo zikaWhatsapp, Facebook kunye ne-Instagram ziluncedo kakhulu, nakuzo zonke iincoko zakho ukubonisa iimvakalelo ezifana novuyo, umdla, ithemba, uthando, ikratshi, ukuzola, umbulelo, impembelelo, ikratshi kunye nezinye ezininzi. Bakwakunika indawo yokubonisa iimvakalelo ezinje ngolonwabo, uthando, uvelwano, ukothuka, uburharha, usizi, umsindo, phakathi kwabanye.
Njengomzekelo woku kungasentla, ungasebenzisa ubuso obuvela kwikhibhodi yedijithali ukubonisa ukuba uziva ulusizi olunzulu ngesizathu esithile. Kwakhona benza kube lula kuwe ukubonisa amaxesha akho olonwabo okanye utshintsho kwimo yakho.
Ezi pictograms zikunceda unciphise inani lamagama ofuna ukuwachaza, njengombono wokuhambahamba, ukuya ezivenkileni, ukulala, ukutya isidlo esimnandi, njl.
Zeziphi ezona emojis okanye ii-emoticons ezisetyenziswa kakhulu kuFacebook nakuWhatsApp?
Apha sibonisa ezinye ze-emojis eziqhelekileyo kwi-WhatsApp kunye ne-Facebook statuses kunye ne-Instagram.
Ukuba uziva umthanda umntu, ufuna ukuba nothando okanye uchukunyiswe bubuhle bomntu okanye into, ungasebenzisa i-emoticon yothando. Ubuso obonwabileyo obuneentliziyo ezimbini emehlweni bumelwe.
Olunye lolona phawu lusetyenziswayo kukoyikisa okanye ukukhala i-emoji., bubuso obumangeleyo obumele uloyiko okanye ukoyikeka kwaye ungabusebenzisa ukuhambisa uluvo okanye impembelelo.
I-emoji eqhwanyazayo imele enye yeendlela ezikhohlakeleyo zokubonisa kwiqabane lakho ukuba kufuneka ube yinxalenye yento ethile okanye ubamemele kumdlalo.
Ukuba ufuna ukuhambisa usizi, kukho ubuso obukhalayo obubonakalisa ngokulula. Yinkxalabo enzulu kwaye inokukunceda kwelona xesha linzima.
Ubhontsi phezulu luncedo ukubonisa isivumelwano, imvume okanye imvume kwisenzo okanye umbono wabanye.
Ukwafumana i-emoji okanye ubuso obungathandekiyo iluncedo kakhulu ukuhambisa ukuthandabuza malunga nombono ophakanyiswe liqela lesithathu. Imelwe bubuso bokungakholelwa, kunye neenkophe ezikhululekile.
Isimboli esineenyembezi zokuhleka okanye uvuyo siyathandwa kuba ikunceda ubonakalise ulonwabo olugqithisileyo, ukuhleka okanye ukubonisa ukuba awukwazi ukuyeka ukuhleka ngento ethile. Unokuyibona ngokulula ngobuso bayo obuncumileyo obunamathontsi amabini, elinye kwiliso ngalinye.
Enye pictograms kakhulu ethandwa bubuso intliziyo kiss. Bubuso obuthumela ukwanga kwaye ngumfanekiso onothando onokwenza nabani na azive kamnandi.
Umdanisi weflamenco luphawu olunxibelelana nomnqweno wokuya kwiqela. Ungayisebenzisa ngokugqibeleleyo ukubonisa ukuba ufuna ukushiya ikhaya lakho iiyure ezimbalwa kwaye ube nexesha elimnandi.
Kutheni kubalulekile ukwazi eyona ntsingiselo yeemvakalelo okanye i-emojis?
Ngamanye amaxesha abantu babelana ngentsingiselo ye-emojis ngendlela engafanelekanga, mhlawumbi ngenxa yokunqongophala kolwazi okanye ngenxa yokuba indawo yenkcubeko ibanike ukusetyenziswa okwahlukileyo ixesha elide, okukhokelela ekuthathweni kwabo ngokungafaniyo.
Inyaniso kukuba i-emoticon nganye inegama elisemthethweni yindawo yokuqala ukuyinika intsingiselo kwimekobume oyisebenzisayo, kuba kungenjalo, kunokubakho ukungaqondi kakuhle kwaye kuya kucaphukisa, kungakhululeki okanye kube neentloni ngenxa yokungaqondi ukuba obo buso buncinci buthetha ntoni.
Ngokomzekelo, kukho imifuziselo ebonisa amaqhalo aseTshayina njengaleyo yeenkawu ezintathu. Ezi zithetha ukuba Musani ukungeva bubi, ningevi kubi, ningathethi bubi, ukanti abantu basebenzisa obu buso ngabanye ukubonisa usizi, ukujonga, okanye ukugcina imfihlo.
Isimboli se abafazi abaneendlebe zomvundla ziyafana nenkanuko, kodwa abantu bahlala besebenzisa le emoji ukubonisa ulonwabo, imincili, okanye ulonwabo. Oku ngakumbi kumaqela abahlobo okanye abahlobo kwaye kubandakanya iinethiwekhi zentlalo ezifana ne-Facebook, Instagram okanye WhatsApp.
Xa kuziwa ekuboniseni ukukhala, ukumangaliswa okanye ukwesaba, abantu bahlala besebenzisa i-emoji yobuso ngezandla zabo ezidleleni zabo. Nangona kunjalo, lo mqondiso unxulumene nomsebenzi we-Edvard Munch eyaziwayo.
Ukwafumana isimboli yelindle, ngamanye amaxesha izenze iice cream yetshokholethi ekhrimu. Inyaniso kukuba indalo yayo inxulumene nenkcubeko Japanese kwaye imele ithamsanqa.
Njengoko sichazile kwimizekelo edlulileyo, i-emoticon nganye inentsingiselo yayo, nangona abantu abaninzi beyinika eyabo. Kodwa kusoloko kubalulekile ukubabonisa njengoko kufanelekile ukuze unxibelelwano lube lulwelo ngakumbi kwaye imiyalezo ayiqondwa kakubi.
© 2022 EmojisWiki.com · Onke amalungelo agciniweUMgaqo-nkqubo weKuki Ngathi?